Ahoana no anampian'ny fakan-tsary miaro ny lalàna amin'ny fampiharana ny lalàna? | Vahaolana OMG
Mpamatsy fakan-tsary miakanjo ambony amin'ny polisy (DVR / WIFI / 3G / 4G) / fitantanana porofo an-tsary any Singapore / Jakarta
Fakan-tsarimihetsika Bore-scope / Endoscope
Camera fakana fiarovana miafina
Olon'ny rafitra Down - vahaolana làlam-pandeha an-trano ho an'ny mpiasa
BWC004 - Varotra mpamily & mpamily tokana v2020-0824
Brochure: BWC043 - Camera Kamera Miaro ny Polisy
Brochure: BWC055 - Mini Camera Worn Camera, manohana ekipa SD Card
OMG Live Stream Client Application 7.13.0.1 (Window Window)
BWC090 Firmware kinova 20200917
Vahaolana voaaro ho an'ny mpiasa an-trano
Ahoana no anampian'ny fakan-tsary miaro ny lalàna amin'ny fampiharana ny lalàna?
Ny fakantsary vita amin'ny vatana dia nizaha fomba iray hamahana ireo fanamby sy fanatsarana ny fampiharana ny lalàna amin'ny ankapobeny. Ny teknôlôjia, izay azo apetraka amin'ny solomaso an-tanan'ny manampahefana na ny faritra misy ny tratrany, dia manome vaovao tena izy rehefa ampiasain'ny manamboninahitra amin'ny patroli na andraikitra hafa izay mampifandray azy ireo amin'ny mpikambana ao amin'ny vondron'olona. Ny tombony hafa amin'ny fakan-tsary mitazona vatana dia ny fahafahany manome ny fampiharana ny lalàna amin'ny fitaovana fanaraha-maso mba hampiroborobo ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny manamboninahitra ary izany koa dia misakana ny asan-jiolahy.
"Ny masoivoho mpampihatra lalàna manerana an'i Etazonia sy eran'izao tontolo izao dia mampiasa fakantsary vita amin'ny vatana (BWCs) ho fitaovana fampanantenana hanatsarana ny voka-tsikera, ary hanatsara ny fiarovana, ary hanatsara ny fifaneraserana eo amin'ny tompon'andraikitra sy ny vahoaka. Ny BWCs koa dia manaporofo fa fitaovana manan-danja hanampiana ny fampiharana ny lalàna mivelatra, ny famahana olana ary ny paikadin'ny fiaraha-monina eo amin'ny sehatra. ”Hoy ny Bureau of Justice Assistance.
Ny fampiasana haingana amin'ny fakan-tsary mandeha amin'ny vatana dia voamarika tato anatin'ny folo taona farany tany Etazonia. Mbola manohy ny teknolojia ireo mpikambana ao amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ny fandinihana ankehitriny dia manome soso-kevitra fa ny fakan-tsary mifono vatana dia manome tombony ho an'ny fampiharana ny lalàna, saingy ny fikarohana fanampiny dia ilaina hahalalanao bebe kokoa ny lanjan'ny teknolojia ho an'ny saha. Ato amin'ity lahatsoratra ity, dia milazalaza kokoa ny fomba manampy ny fakan-tsary ho an'ny vatana ny fampiharana ny lalàna.
Tombontsoa amin'ny fakantsary miady amin'ny vatana
Ny fananganana sy ny fampielezana fakan-tsary mifono vatana dia nanome fanampiana be dia be ny masoivoho fampiharana ny lalàna. Ny tombontsoa lehibe sasany amin'ny fampiasana an'ity teknolojia ity dia:
Ampitomboy ny fahatokisan'ny daholobe ny polisy any an-toerana
Kely ny fitarainana voasoratra amin'ny polisy sy ny mpampihatra lalàna hafa
Fahotana voalohany noho ny porofo mafy orina
Fihenana amin'ny fanafihana ataon'ny polisy
BWC (Body Worn cameras) dia manarona ireo faritra tsy napetraky ny CCTV
Ny fanamafisana ny fahaizan'ny manampahefana rehefa avy nandinika ny fomba niakaran'izy ireo teo amin'ny sehatra.
Ny fakantsary raisina am-batana dia mahazo tombony betsaka izay ankafizin'ny polisy sy ny polisy ka miteraka tontolo sy filaminana tsara kokoa.
Porofo azo resahina:
Iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fantsom-batana Body Worn ny hoe manome porofo ampy izy ireo izay azo raisina ho porofo tsy azo iadian-kevitra ao amin'ny fitsarana ary manampy tsara ny fanenjehana. Raha manangona porofo toy izany dia mihazona karazana protocols sasany:
Fampiasana fitaovana an-tsokosoko
Tsy misy famafana sy fanitsiana endri-tsoratra izay hita amin'ireto cams ireto
Famafana ny fakana sary taorian'ny andro 31
Fahaiza-mitahiry rakitra ilaina
Làlana fanamarinana feno
Mangarahara tsara kokoa:
Ny fakan-tsary miakanjo vatana dia mety hiteraka fangaraharana sy fandraisana andraikitra bebe kokoa ary noho izany manampy sy hanatsarana ny fampiharana ny lalàna. Tsikaritra fa ao amin'ny vondrom-piarahamonina maro dia misy ny tsy fahatokisana ny eo an-toerana sy ny talen'ny fampiharana ny lalàna. Miharatsy ny tsy fahatokisan-tena raha misy ny fanontaniana momba ny fampiasana hery mahafaty na tsy mahafaty. Ny rakitsary horonantsary alaina mandritra ireo fifandraisan'ny manampahefana-vondrom-piarahamonina ireo dia mety hanome dokambarotra tsaratsara kokoa mba hanamafisana ny maha zava-mitranga sy ny kaonty tohanan'ireo manampahefana sy mponina.
Mitombo ny fahatsiarovana:
Tsiahivina fa ny olom-pirenena dia mahazo mankasitraka kokoa ny baikon'ny manamboninahitra mandritra ny fihaonana. Matetika ny olom-pirenena dia miova toetra rehefa fantany fa voarakitra an. Manampy ny fampiharana ny lalàna amin'ny fomba toy izany ny fametrahana ny fihaonan'ny ambany ambany fa tsy hiakatra amin'ny karazana iray izay ilaina amin'ny fampiasana herisetra.
Fantatsika fa ny fakantsary hafa dia miova fitondran-tena. Ny fakantsary fahitalavitra mikatona manokana ho an'ny daholobe dia toa mitarika ny fihenan'ny heloka bevava, indrindra amin'ny garazy. Ny fakan-tsary mifamoivoy be dia be ny fihenan'ny lozam-pifamoivoizana sy haingana.
Na ny soso-kevitry ny olona iray mijery antsika aza dia maniry hitaona antsika. Ao amin'ny 2011, ny mpikaroka ao amin'ny Oniversite Newcastle any Angletera dia nandefa sarin'olon-droa lahy sy ny sary;
"Mpangalatra bisikileta: Mitsinjo anao izahay."
Nihena ny isan'ireo mpangalatra bisikileta 62 amin'ireo toerana ireo - fa tsy any an-kafa.
Hatsarao ny fahaiza-manao:
Ny fampiasana fakan-tsary mandeha amin'ny vatana ihany koa dia manome fotoana mety handrosoana ny fanaovana polike amin'ny alalan'ny fiofanana. Ireo mpanazatra ny lalàna sy mpanatanteraka lalàna dia afaka mampiasa ny haino aman-jery mba hanome traikefa akaiky ny fihaonambe tena izy. Azon'izy ireo atao ny mandinika ny fihetsiky ny manamboninahitra sy ny fitondran-tena voasambotr'ireo amboadia. Manampy amin'ny fandrosoana ny matihanina eo amin'ny manampahefana sy mpitrandraka. Ho fantatr'izy ireo hoe inona no mety hitranga any amin'ny besinimaro sy ny fomba hisorohana an'io.
Fametrahana paikady vaovao tsara kokoa:
Ny firaketana horonantsary tratra tamin'ny fakan-tsary mitazona vatana dia mety hanome ireo mpanatanteraka lalàna fampiharana ampy mba hampiharana paikady vaovao izay tsara ampidirina indrindra mba hahazoana fahazoana ny fahatokisan'ny daholobe sy ny fampiharana ny lalàna tsara kokoa ao amin'io vondron'olona io.
Voka haingana sy tsara kokoa:
Ny fakan-tsary mandeha amin'ny vatana dia manafaingana ny tahan'ny famahana ny raharaha izay fiampangana tafahoatra amin'ny herisetra na asa ratsy ataon'ny mpampihatra lalàna. Ny fanadihadiana momba ny raharaha misy ny kaonty tsy mifanipaka amin'ny fihaonana avy amin'ny manampahefana sy olom-pirenena dia matetika no hita fa tsy "tohinina" ary aorian'izay dia mihidy rehefa tsy misy horonantsary horonantsary na vavolombelona mahaleo tena na manamarina. Izany dia mety hampihena ny fahatokisan'ny vahoaka sy ny fahatokisan-tena amin'ny fampiharana ny lalàna ary hampitombo ny fiheverana fa ny fangatahana fanararaotana nanoherana ny manamboninahitra dia tsy ho voaresaka tsara. Ny horonantsary nalain'ny fakantsary fiakanjo dia mety hanamarina ny zava-misy amin'ilay fihaonana ary hiteraka vahaolana haingana kokoa.
Manandratra ny fahatokisan'ny manamboninahitra:
Miaraka amin'ny lanjan'ny fakan-tsary amin'ny alàlan'ny fakan-tsary, ny tenan'ireo manampahefana dia nahatsapa ihany koa ny vokatra tsara avy amin'ny fanaovana fakan-damba amin'ny vatana miaraka amin'ny 93% manamboninahitra mino ny fakan-tsary amin'ny vatan'olombelona izay manampy amin'ny fanangonana porofo ary ny 80% mpiasam-panjakana mahatsapa fakan-tsary miakanjo vatana dia tokony ho voatery.
Vitsy kokoa ny fitarainana apetraka amin'ny manampahefana:
Ny fihenan'ny fihenam-bidy dia voamarina amin'ny fitarainana napetraka amin'ireo manampahefana izay manana fakantsary miakanjo vatana. Ny isan'ny fitarainana napetraka momba ny manamboninahitra dia nidina tamin'ny fitarainan'ny 0.7 isaky ny fifandraisana 1,000 mankany 0.07 isaky ny fifandraisana 1,000 voalaza ao amin'ny famoahana.
Na dia manasongadina ny maro amin'ny lafy tsara amin'ny fampiasana fakan-tsary mitafy vatana amin'ny fampiharana polisy sy fampiharana fampiharana lalàna aza ireo rehetra voalaza etsy ambony, ireo fakan-tsary ireo dia tsy tokony horaisina ho 'bala majika'. Ny fakan-tsary mitafy vatana dia iray amin'ireo fitaovana maro azo ampiasaina amin'ny rafitry ny polisy maoderina mba hanatsarana ny fahombiazana sy ny fiarovana.
Ahoana no anampian'ny fakan-tsary miaro ny lalàna amin'ny fampiharana ny lalàna? no farany niova: Septambra 26th, 2019 by Admin
3342 Total Views 6 Views Today
Birao OMG Solutions Batam ao @ Harbourbay Ferry Terminal
OMG Solutions dia nividy unitera any Batam. Ny fananganana ny ekipan'ny R&D ao Batam dia ny fanomezana fanavaozana mampiakatra mba hanampiana ny mpanjifa vaovao sy efa misy tsara kokoa.
Tsidiho ny biraon'ny birao ao Batam @ Harbourbay Ferry Terminal.
Orinasa 500 ambony any Singapore 2018 & 2019
Fakan-tsary mivantana mivantana 4G
↳ BWC095-WF4G - OMG WIFI / 4G / GPS azo esorina ny fakan-tsary
↳ BWC099-WF4G OMG 4G Double Lens Camera ho an'ny Miady Miaramila
↳ BWC095-WF - WIFI GPS Live Streaming Camera Camera (Solika azo esorina)
↳ BWC073-4GFR - Kamera nitazona ny vatan'ny polisy OMG - 4G Live Stream miaraka amin'ny famolavolana endrika ho an'ny mpiambina ny seranam-piaramanidina
↳ BWC065 - fakan-tsary OMG Helmet Camera 4G WIFI
↳ BWC058-4G - fakan-tsary OMN Mini Body miaraka amin'ny fankatoavana tarehy (WIFI / GPS / 4G)
↳ BWC009 - fakan-tsary an'ny kamela helikoptera OMG WIFI / 4G / GPS
↳ OME 4G Wireless Body Camera (BWC004-4G)
Lahatsoratra - Camera Camera
↳ Fanaraha-maso ny lalàna sy ny tsiambaratelo any Azia
↳ Ny filàna fakan-tsary mivoaka amin'ny vatana sy ny vokatr'izy ireo amin'ny polisy sy ny vahoaka
↳ Fanaovana teknolojia momba ny fakan-tsary amin'ny vatana mandritra ny taona maro
↳ Fa maninona no manampy ny fitantanana ny lalàna ny fakan-tsary?
↳ Fiantraikany amin'ny mpiambina fiarovana amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana
↳ Tombontsoa amin'ny fakan-tsary an'ny Body-Worn
↳ Fakan-doka amin'ny vatana: Tactics izay mety hanampy amin'ny hôpitaly
↳ Fampidirana ny fanekena ny tarehy amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana
↳ Hevi-dehibe homarihina alohan'ny fividianana fakantsary valahana
↳ Fiarovana ny tambajotram-panjakan'ny governemanta miaraka amin'ny fakantsary miendrika vatana
↳ Fakan-tsary Leverage Body hiantohana ny fiarovana ny mpiasa amin'ny sehatry ny indostria
↳ Fampidirana ireo tetika sy fianarana momba ny fakantsary miendrika vatana
↳ Ireo fomba fiasa hampiasa fakantsary miady amin'ny vatana
↳ Fakan-tsary miady amin'ny vatana: Manatsara ny fifandraisan'ny mpiasa miasa amin'ny marary amin'ny fahasalamana
↳ Kamera Vatan'ny polisy dia niandrandra ny fampahafantarana tarehy
↳ Misafidiana ny fakan-tsary mety amin'ny vatana
↳ Teknika azo antoka ampiasain'ny governemanta hiarovana ny vatan'ny fakan-tsary amin'ny vatana
↳ Tombontsoa amin'ny fakantsary ara-batana avy amin'ny indostria
↳ Fandaharana fakan-tsary sy kilasy famokarana vatana
↳ Fomba fampiasan-dàlana amin'ny vatana amin'ny vatana
↳ Ny tombony azo amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana ao amin'ny hopitaly
↳ Fampiroboroboana ny fahazoana endrika endrika ho an'ny mpiasan'ny fampiharana ny lalàna
↳ Manapa-kevitra amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana mety
↳ Fomba izay azon'ny governemanta ampiasaina amin'ny fiarovana ny tambajotra ho an'ny fakan-tsary amin'ny vatana
↳ Fampiasana fakantsary ala amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny indostria
↳ Fandrafetana ny fakan-tsary ho an'ny fakan-tsary mifofofofo vatana sy lesona nianarana
↳ Torolàlana ho an'ny fampiasana fakan-tsary amin'ny vatana
↳ Tonga amin'ny fakantsary miady amin'ny polisy ny polisy
↳ Tambajotra azo antoka amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana ho an'ny governemanta
↳ Fampiasana fakantsary miady amin'ny vatana avy amin'ny Indostria
↳ Fanatanterahana ny programa fakan-tsary amin'ny rindran'asa amin'ny vatan'olombelona sy lesona
↳ Ny fakantsary mipetraka ao amin'ny cameras
↳ Ny fivoaran'ny Technology Camera-Worn
↳ Tombontsoa azo avy amin'ny fakantsary azo alaina amin'ny fahazoana lalàna
↳ Orinasa fiarovana - Ahoana ny fiantraikan'ny fakantsary fatin'ny polisy
↳ 5 Zavatra tokony ho fantatra momba ny fakantsary polisy
↳ Tombontsoa amin'ny fakan-tsary an'ny Fampitandremana ho an'ny polisy
↳ Ny fakantsary fiadian'ny polisy sy ny tsiambaratelo
↳ Ahoana no anampian'ny fakan-tsary miaro ny lalàna amin'ny fampiharana ny lalàna?
↳ Vokatry ny fakan-tsary masiaka amin'ny vatana amin'ny mpiambina
↳ Tombontsoa ho an'ny fakantsary raikitra an'ny polisy
↳ Ny fijerin'ny olom-pirenena ny fakan-tsary mifono vatana
↳ BWC097-WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G Bluetooth Walkie Talkie miaraka amina fakan-tsary roa
↳ BWC095 - Fakan-jiro an'ny bateria vita amin'ny OMG
↳ BWC094 - fakan-tsary Mini namboarina an'ny OMG
↳ BWC089 - OMG 16 Japoney Mpitam-piadiana maivana marobe an'ny polisy (Wide Angle 170-Degree)
↳ BWC090 - Kameran'ny biraon'ny polisy maivana OMG ho an'ny mpiambina fiarovana (Angle Wide 170-Degree 12 hrs miasa)
↳ BWC081 - fakan-tsary miakan'ny vatan'ny polisy miaro tena amin'ny OMG Ultra Mini Mini (Wira 140 + alina alina)
↳ BWC075 - fakan-tsary miakan'ny vatan'ny polisy polisy kely indrindra kely indrindra
↳ BWC074 - fakan-tsary mijaly vatana mavesatra an'ny OMG Mini amin'ny alàlan'ny famoronana Super Video - 20-25 Hrs ho an'ny 32GB [Tsy misy LCD LCD]
↳ BWC058 - fakan-tsary OMN Mini Body - Compression Super Video - 20-25 ora amin'ny 32GB
↳ BWC061 - OMG Long Hours [16 Hrs] Fakan-tsary Worn Body recording
↳ BWC055 - fakan-tsary SD Card Mini Vavy azo esorina OMG
↳ Ny fakan-tsary miady amin'ny herin'ny maizina OMG Light OMID, Video 1728 * 1296 30fps, H.264, 940NM Nightvision (BWC052)
↳ BWC041 - fakan-tsary OMG Badge Badge OMG
↳ Fakan-tsary OMN Mini Body, 2K Video (SPY195)
↳ BWC010 - fakan-tsary miakanjo ny polisy an'ny OMG Mini, 1296p, 170Deg, 12 ora, fahitana amin'ny alina
↳ BWC004 - Fakan-dakan'ny polisy miendrika boribory ny OMG
↳ BWC003 - fakan-tsary miakanjo ny polisy an'ny OMG Mini
↳ Fakan-tsarimihetsika bokotra OMG azo ampiasaina, fakana sary mihetsika ho an'ny Motion (SPY045B)
↳ OMG WIFI azo ampiasaina azo itokisana azo fakan-tsary 12MP, 1296P, H.264, fifehezana fampiharana (SPY084)
Fitaovana fakan-tsary ho an'ny vatana
↳ BWA009-CC - Car Charger ho an'ny fakan-tsarimihetsika vita amin'ny vatana
↳ BWA015 - OMG Helmet Body Worn Holder Camera
↳ BWA004-LB - OMG Body Cam Lanyard Bag / Poucho
↳ BWA007-DSH - Harran'ny OMG Shoulder Double strap
↳ BWA006-RSH - OMG Body Cam Reflective Harap
↳ BWC010-LC - Clip Fanakan-dakan'ny Kamera OMG
↳ BWA003 - Toro-bolon-koditra hoditra OMG hoditra
↳ BWA015 - fehikibo fehikibo karatra fehin-kibo an'ny polisy OMG
Toeram-pitsaboana fakan-tsary amin'ny vatana
↳ BWCDS014-16PD - OMG Compact 16 Ports Body Worning Docking Camera
↳ BWCDS012 - 20PD - OMG 17 santimetatra efijery finday 20 foiben-dranon-dàlana ho an'ny polisy ho an'ny cameras
↳ BWCDS010-16PD - OMG 16 Ports Body Worn Camera Docking Station miaraka amin'ny fampisehoana
↳ BWCDS011-10PD - OMG 10 Ports Body Worn Camera Docking Station miaraka amin'ny fampisehoana
↳ BWA011-DS01 - Station serivisy Port 10
↳ OMG Digital Management Software [ODEMS] (BWC045)
↳ Seranan-tsambo OMG 8 miaraka amin'ny fampirantiana
↳ BWC002 - Biraon'ny dokambarotra OMG 20
Fakan-dàlana ho an'ny loha-fametrahana
↳ BWC078 - OMG OTG USB Android sy WIFI Smartphone Mini Bullet Body Helmet Camera
↳ BWC062 - fakan-tsary mihetsika an'ny OMG
↳ BWC076 - Kamera mpanao vovoka an'ny polisy OMG miaraka amin'ny Lohan'ny bala ho an'ny Paramedics
↳ BWC072 - Hetsika ivelan'ny rano tsy fakan-dakan'ny kamela helikoptera miaro ny rano - WIFI Waterproof
↳ Fakan-tsary miakan-doha hita faty OMG (BWC056)
Tsy misy sokajy - Camera Camera
↳ BWC071 - Camera Mini Worn Camera
↳ BWC066 - Tetefam-bolan'ny polisy an'ny polisy ho an'ny Helmet
↳ Sarimihetsika mora simba mitambatra amin'ny alàlan'ny fanoratana [amin'ny LCD Screen] (BWC060)
↳ BWA012 - Biraon'ny seranan-tsambo 10 - Rafitra fitantanana porofo
↳ Mini HD Body Gnome Polisy Camera, 12MP OV2710 140 Degree Camera, H.264 MOV, 1080P, TF Max 128G, Long Time Work (BWC053)
↳ Fakan-tsarimihetsika Helmetika helika mihetsika OMG Wifi Mini (BWC049)
↳ Mini Spy Camera - Hidden Pocket Pen Camera 170 Degrees Wide Angle (SPY018)
↳ Fakan-tsary miendrika vatan'ny OMN Affordable 4G (BWC047)
↳ Fakan-tsary mipetaka eo amin'ny vatan'ny fahamaotinana (BWC042)
↳ BWC040 - fakan-tsary HD Body Word
↳ Batterie azo esorina - Camera fakan'ny vatana (BWC037)
↳ Karazana karaoty - 8 Ports Docking Station (BWC036)
↳ Body Worn Camera - 3G, 4G, Wi-Fi, Live streaming, Remote control live, Bluetooth, Mobile APP (IOS + Android), 8hrs fandraketana an-tsoratra, fanaraha-maso miketaka. (BWC035)
↳ Body Worn Camera - Novatek 96650 chipset, karatra fitehirizana namboarina (BWC033)
↳ Body Worn Camera - Ambarella A7LA50 chipset, 140Degree Wide angle, 128GB Max fitahirizana, GPS natsangana (BWC031)
↳ Body Worn Camera - Ambarella A7LA50 chipset, 140Degree Wide angle, 128GB Max fitahirizana, GPS natsangana (BWC030)
↳ Camera Worn Camera - Ambarella A7LA50 chipset, 170Degree Wide angle, 128GB Max fitahirizana, karazana bateria azo esorina (BWC028)
↳ Body Worn Camera - Ambarella A7LA50 chipset, 170 sudut-maso Wide, 128GB Max fitahirizana (BWC026)
↳ Camera Camera: Novatek 96650 chipset (BWC025)
↳ Camera Camera: Vatany 2500mAh roa (BWC024)
↳ Karazan-koditra External SD Camera (BWC021)
↳ Fakan-tsary OMG 4G Voninkazo vatana (BWC012)
↳ Fitaovam-pamokarana GPS polisy miala amin'ny polisy [140deg] (BWC006)
↳ BWC007 OMG - Ambarella A12 Body Worn Camera / WIFI Video Live Stream / Long working
↳ OMG 12 ports Body Docking Station (BWC001)
↳ Hidden Mini Spy Camera (SPY006)
↳ Feo nomerika sy horonantsary nomerika, Video 1080p, Feo 512kbps, 180 Deg Rotation (SPY106)
↳ Camera Camera (DigitalWury) (BWC008)
↳ Mpikambana fakan-tsary miady amin'ny polisy ambony indrindra any Etazonia
vatana mitafy fakan-tsary
Fantsom-baravarana Malalaka AES256
World kely indrindra
Tantara mikasika ny vahaolana OMG
Ny OMG Solutions dia manampahaizana manokana amin'ny endrika fanarenana, firaketana ary teknolojia fanairana. Manolotra vahaolana maoderina amin'ny olana izahay, anisan'izany ny rafitra fisorohana ny fahalavoana ho an'ny zokiolona, ​​ny fandraisam-peo lavitra, ny fanairana fiarovana ary ny maro hafa. OmG Solutions dia nomena ny Singapore 500 Enterprise 2018 sy 2019, fa miitatra lavitra ny tanàna mankany amin'ny firenena hafa toa an'i Indonezia ny fitaomantsika. Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho izahay hitsidika azy Momba anay pejy